‘राष्ट्रिय राजनीतिक ऐक्यवद्धता बिना कृषि प्रवद्र्धन असम्भव’ – NewsAgro.com
November 30, 2017 December 1, 2017 newsagro0Comments किसान, कृषि, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार क्याम्पस, गुन्द्रुक, झापाली कफी, डेरी उद्योग, भक्का
• श्यामकुमार मिश्र, सह प्राध्यापक, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरान
केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानमा २० वर्ष प्राध्यापन गरेका सहप्राध्यापक श्यामकुमार मिश्र ‘फुड टेक्नोलोजिस्ट’ हुन्। अवकाशपछि झापामा गाउँले जीवन बिताइरहेका उनी कृषिकर्म गर्ने, ग्रामीण किसानहरूसँग सहकार्यमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेका छन्। भक्का, गुन्द्रुक, झापाली कफी आदिलाई ब्रान्डिङ र मार्केटिङ गराउनेमा उनको दिनचर्या व्यतीत छ। एनएमसी डेरी उद्योग नेतृत्व गरिरहेका मिश्रले कुराकानी गर्दै कृषि प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्व र समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तारमा व्याख्या गरे। अनि देश विकासबारे चल्तीका विमर्शहरूबीच फरक स्वादका तर्कहरू पनि गरे। प्रस्तुत छ, मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको अंश :
राज्य अरू जेसुकै दिए पनि ज्ञान दिएको छैन। ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। अहिले आर्थिक विकासको कुरा चल्दैछ। ६८ प्रतिशत किसानलाई सिपालु बनाउनेमा यथेष्ट ध्यान अझै देखिएको छैन। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। देश अगाडि बढ्नका लागि कृषिमा आधारित नागरिकको संख्या घट्दै(घट्दै जानुपर्छ, तर कृषिका उत्पादन बढ्दै जानुपर्छ। हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ। जीविकोपार्जनका लागि किसानहरूले जेजे सिकेका छन्, त्यो पुर्खाको विरासतबाट प्राप्त ज्ञान हो। एक बिघा भएको किसानले आफूलाई आवश्यक सबै चिज सकेसम्म त्यहीं उत्पादन गर्ने अनि जसोतसो निर्वाह चलाउने गरिरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीमा यसरी चल्दैन।
हरेक देशमा किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। किसान आफ्नो उत्पादनमा घाटा सहेर जनतालाई खुवाउन सक्दैन। राज्यले किसानलाई ‘सब्सिडीु दिनुपर्छ। हाम्रो राज्य कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नेमा विल्कुलै अनभिज्ञ भयो। अहिले दलका चुनावी घोषणापत्र आएका छन्। मैले कृषिमा तिनका विचार के छ भनेर पढेको छु। कसैले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिलाई मानेका छैनन्।
चुनाव भएकाले गर्दा सबैले त्यस्तो भन्नैपर्‍यो। हामी कृषिलाई हेर्छौं, रोजगार सिर्जना गर्छौं भन्छन्। तर किसानकै लागि भनेर कसैसँग पनि प्रस्ट सोच छैन। स्थानीय स्तरमा किसानका लागि स्कुल खोलिनुपथ्र्यो। त्यहाँ आएर तालिम लिन सकियोस्, नत्र किसानलाई कसले सिकाइदिन्छ रु सरकारी संरचनाबाट किसानका लागि आएका अनुदान देखाउनका लागि मात्रै हुन्। किसानले सोझै अनुदान लिन सक्ने अवस्था छैन। आधाजति राज्यतिरै फर्किन्छ।
प्राध्यापन गरिसकेर म आफ्नो गाउँमा बस्न आएको छु। पढेलेखेका विज्ञहरू समय निकालेर गाउँमा बस्नुपर्छ। पढालेखा सहर केन्द्रित हुने, सहरबाट विदेश जाने अनि नेपालमा केही हुँदैन भनेर तिनीहरूले नै भन्ने रु अनि के नेपालचाहिँ विदेशीहरू आएर बनाइदिन्छन् रु मैले आफ्नो ज्ञानलाई थोरै भए पनि आफ्नो गाउँका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले अनिवार्य रूपमै यो प्रणाली बसाल्नुपर्छ। भन्नेबित्तिकै पासपोर्ट किन बनाइदिने रु विदेश जान चाहने विज्ञहरूका लागि राज्यले ‘क्राइटेरियाु बनाइदिनुपर्छ। राज्यले शिक्षा दिएको छ। व्यक्तिको शिक्षादीक्षामा राज्यको खर्च भएको छ, तर त्यो विज्ञताको प्रयोगचाहिँ विदेशमा प्रयोग भइरहेको छ। अनि कहाँबाट हाम्रो लगानीले प्रतिफल पाउँछ रु त्यसैले एक समय आफ्नो गाउँमा गएर विज्ञता लागू गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ। देश बनाउने विचार छ भने गाउँमा गएर बस्नुपर्छ।
देश नबन्नुमा नेतालाई दोष दिइन्छ ? उसो भए अरूको पनि दोष रहेछ ?
नेता दोषी हुन्, तर नेतामात्रै दोषी होइनन्। जो नेतालाई देश बन्न नसकेकोमा दोष दिन्छ, ऊ आफैं नेता बन्न किन सक्दैन ? जसले आफ्नो काम राम्ररी गर्न सक्दैन, त्यसले नेतालाई गाली गर्नुको कुनै तुक छैन। म त्यो काम गर्नु सक्छु, तर अर्को आएर नगर भन्छ। ऊ स्वयंले त्यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? केही प्राध्यापकहरू भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई बाहिरबाट जति पैसा आउँछ, त्यसको तुलनामा विश्वविद्यालयबाट आउने तलबले निर्वाह चल्दैन।’
राजनीतिकर्मीहरूले सर्वज्ञाता हुन खोज्ने होइन, आफ्नो मुद्दामा स्पष्ट भए पुग्छ। समग्र विचार त विज्ञहरूबाट लिए पनि हुन्छ। देशलाई कसरी अगाडि लैजाने रु विकासका मोडलहरू केके हुन सक्छन् रु बाटो बनेपछि, बिजुली आएपछि देश धनी भइहाल्छ भन्ने होइन। देश धनी हुनका लागि उत्पादन हुनुपर्‍यो। उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री हुनुपर्‍यो। अहिले नेपाल जुन व्यापार घाटाको सामना गर्दैछ, त्यो देश धनी हुने लक्षण होइन। त्यसले पहिले व्यापार घाटा शून्य हुनुपर्‍यो। अनि हाम्रो व्यापार बढ्नुपर्‍यो। देश त्यो बेलामात्रै धनी हुन्छ। केकेमा पुँजी लगानी गर्दा, केके उत्पादन गर्दा, अनि केके सामान बेच्दा हामीले आयात कम गर्न सक्छौं र निर्यात बढाउन सक्छौं, त्यो हेरेर योजना बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूले जलविद्युत्का कुरा गर्दै आउनुभएको छ, तर जलविद्युत होइन, कृषिमै जोड दिनुपर्छ। कृषि, पशुपालन, फलफूल र जडिबुटीमा राष्ट्रिय प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा स्पष्ट भए हुन्छ।
एकदमै सही कुरा उठ्यो। म पनि सोधिरहेको छु( त्यस्तो किन हुन्छ रु के गुणस्तर नपुगेर हुम्लाजुम्लाका स्याउ नबिकेका हुन् रु दूध सडकमा पोखिएका हुन् रु होइन। किसानले उत्पादन गर्छ, बजारीकरण गर्न सक्दैन। राज्यले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भिजन हुनुपर्छ। विदेशबाट स्याउ आइरहेको छ, भन्सारमा कमिसन आउँछ, अनि त्यो मेरो घरमा पनि आउँछ भनेर चुप लागेर बस्नेहरू राज्यका अंगहरूमा बसेका छन्। एक दाना स्याउ पनि फाल्नु नपरोस्। हाम्रो खपतबाट बचेको एक दाना स्याउ पनि बाहिर लगेर बेच्न सकियोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्‍यो। अहिलेसम्म सैनिकहरूलाई खुवाउने ‘कन्डेन्स मिल्कु को केही अंश चौधरी ग्रुपले उत्पादन गर्नेबाहेक सबै बाहिरबाट आउँछ। विदेशबाट ल्याउँदा कमिसन आउँछ भन्नेमा ध्यान छ, सरकारमा बस्नेहरूको। यसरी देशलाई धनी बनाउन सकिन्न। किसानको छोरो गाई पालेर कार ढ्ने भयो भन्ने सन्देशमा शक्ति छ । त्यसैले विदेश जानेहरुमा रहर मात्रै नभएर बाध्यतासमेत किन छ भन्ने सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।
अन्नभण्डार भन्छन् झापालाई। यहाँ कुनै बेला मेची धान-चामल निर्यात कम्पनी थियो। थुप्रै ठूला धान मिल थिए। भारतबाट धान किन्न आउनेहरूलाई हेर्दै यहाँ कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरूले सोच्थे, ‘हामीले धान दिएनौं भने तिनीहरू भोकै बस्लान्।’ हाम्रो कल्पना त्यस्तो थियो। अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। हामीले निर्यातलाई निरन्तरता दिन सकेनौं। राज्यको गलत नीतिबाटै यस्तो अवस्था आयो। कृषिलाई साँच्चै आधुनिकीकरण गर्ने हो भने सरकारले एक कट्ठा जग्गा सुकुम्बासीलाई बाँड्ने भन्छ, त्यसो होइन। साँच्चै राज्य हो भने त्यसले जमिनहरू आफूसँग राख्नुपर्छ। जग्गालाई टुक्रा गर्ने होइन, ठूलाठूला चाक्ला बनाउनुपर्छ। मेसिन र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी उत्पादन बढाउनुपर्छ। यस्ता थुर्पै सम्भावना छन्, खासगरी तराईमा। मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूलका सम्भावना छन्। आठ-दस वर्षअघिको कुरा हो, खनारमा राँगाको मासु काट्ने एउटा स्लटर हाउस बनेको थियो। त्यसमा चीनसँग एउटा सहमति भएको थियो-‘सयवटा राँगा काट्ने, एक महिनापछि एउटा कन्टेनर भरिन्छ। अनि कलकत्ता हुँदै त्यो मासु चीन लैजाने।’ त्यसअनुसार संरचना बन्यो, काम सुरु भयो।
दैनिक सय राँगा काटेर विदेश पठाउने हो भने दैनिक सयवटा छाला आए, सयवटा हड्डी आउने भए। दैनिक भिसेरा आयो। यी सबै चिजलाई हामीले पैसामा परिणत गर्न सक्नुपथ्र्यो। विडम्बना, १०-१२ वटाभन्दा राँगा त्यो कम्पनीले पाउनै सकेन। अहिले सय होइन, तीन सयवटा राँगा काटेर बाहिर पठाएर पनि त्यहाँ मार्केट तयार छ। हामी कृषिप्रधान देशका मान्छे मेहनत गर्न सक्छौं। अहिले पनि गाईवस्तु पाल्न सक्छौं। तर विकसित देशका मानिसहरू यो झन्झटमा लाग्दैनन्। उनीहरूसँग पैसा छ, किनेर खान सक्छन्। त्यसैले यो सम्भावना हेरेर हामीले काम गर्नुपथ्र्यो। त्यहाँ खनारमा एकजना चिनियाँ आएर बसेका थिए। व्यवसाय नाफामै चल्ने प्रस्ट थियो, तर राँगा नै उपलब्ध भएन। पैसा तिरे पनि राँगा नपाइने अवस्था आयो। कसले पाल्ने राँगा रु तपाईं पाल्नुहुन्न, मैले पालेको छैन र अर्कोले पनि पालेको छैन।
हाम्रो शिक्षाले त कस्तो कुरा दियो ! कृषक आफ्नो सन्तानलाई भन्छ,‘पढ है बाबु-नानी, पढ्यौ भने तिमीले मैले जस्तो काम गर्नुपर्दैन। बाबु, माटो छुनु हुन्न। राम्रो पढेनौ भने मजस्तै धुलोमाटोमा काम गर्नुपर्ला।’ कृषिलाई पूर्वजन्मका अपराधको सजाय ठानियो। मैले गरे पनि छोराछोरीले गर्नु नपरोस् भन्ने ठानियो। हामी विभिन्न धर्म मान्नेहरू कोही घामलाई, हावालाई, ढुंगालाई, पानीलाई, रुखलाई मूर्तिलाई पूजा गरिरहेका हुन्छौं। वास्तवमा भगवान् हरिया बोटबिरुवा हुन्। तिनले अक्सिजन र खानेकुरा दिन्छन्। कृषिप्रधान देशका मानिसहरूले बोटबिरुवालाई स्याहार गर्नुपर्छ। यसमा सबै मानव जातिको कल्याण छ, तर हाम्रो शिक्षाले बोटबिरुवाबाट हामीलाई टाढा लैजाँदै छ। पढेका मानिसहरूले खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
विकासका कुरा गर्दा हामी विदेशमा राम्रा कुरा मात्रै गर्छौं। उनीहरू पनि हाम्रोजस्तै अवस्थाबाट क्रमिक विकास भएर त्यहाँ पुगेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छौं। विकास भनेको एकैचोटि हुँदैन, एकएक कदम गर्दै अघि जानुपर्छ। जस्तो : एउटा हलो बनाउन अहिले पनि एउटा रुख काट्नुपर्ने अवस्था छ। ट्र्याक्टर सबै ठाउँ छैन। करुवा बनाउनुपर्‍यो, फाली बनाउनुपर्‍यो। भैंसीको छालाबाट हल्लुड बनाउनुपर्‍यो। जोतारो, जुवा, लट्ठी बनाउनुपर्‍यो। यो कहिले आविष्कार भएको हो ? विकास गर्ने हो भने यसमा क्रमिक परिमार्जन हुनुपर्‍यो। सिटी रिक्सा आयो, तपाईं अहिले रिक्सा कमै देख्नुहुन्छ। अब रिक्सावालाको जीवन र सिटी रिक्सावालको जीवनस्तरमा फरक पर्न थाल्यो। तर हाम्रा नेपाली किसान हिजो जुन अवस्थामा थिए, त्यसभन्दा एक स्तर पनि अघि सर्न सकेका छैनन्। अब गोरु जोत्नु हुँदैन। पशुलाई किन दुःख दिने ? टाउको र पिठ्यँमा किन भारी बोक्ने ? रोबोटले गर्ने बेला भइसक्यो, मानव जातिलाई कति दुःख दिने ? एक्काईसौं शताब्दी भनेर सत्रौं शताब्दीमा बसिरहने ? त्यसैले पाइलैपिच्छे सक्दो आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। सरकारले किसानलाई भने हुन्छ, ‘सय बिघा जमिनलाई कृषिका लागि एकीकरण गरेर आऊ, तिमीलाई ट्र्याक्टर दिन्छु।’
चेतनाको कोणबाट हेर्ने हो भने विदेशीहरू केही समय आएर काम गरेको ठिकै हुन्छ, तर हामीसँग आईएनजीओ, एनजीओ आएर किसानहरूका बानी बिगारिदिएका छन्। हाम्रो बजेट विदेशबाट आउँछ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै विदेशबाट यति सहयोग आउँछ भनेर आशा गरेको हुन्छ। किसानहरू पनि सहयोग आए गर्ने, नत्र नगर्ने भन्ने बानी परिसकेका हुन्छन्। त्यसैले कुनकुन ठाउँमा आवश्यक छ, त्योबराबर मात्रै प्रविधि दिनुपर्छ। हामीसँग भएका विधि(प्रविधि पहिले प्रयोग गरिसक्नुपर्छ। सम्भव नभएका सहयोग मात्रै विदेशबाट लिनुपर्छ, त्यो पनि नियन्त्रित रूपमा।
विदेशी दातृसंस्था यहाँ किन आउँछन् रु नेपाल गरिब र पिछडिएको छ, त्यसैले थोरै भए पनि सहयोग गरौं भन्ने कारण पनि हुन सक्छ। नेपाल अति सुन्दर भएकाले आईएनजीओसँग आउने कर्मचारीका लागि रमाइलो गर्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ। नेपालमा आज यति सहयोग गरे भोलि मेरा लागि बजार हुन सक्छ भन्ने पनि होला। विनास्वार्थ कोही आएको छैन। हामीले के लिने र नलिने भन्नेमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। भारतमा अंग्रेज आउँदा व्यापार गर्नैै भनेर आएका थिए। पछि सबै लिए। अहिले विदेशीहरू आउँदा निःस्वार्थ भएर नेपालीलाई सघाउन आएका हुन् कसैले भन्ठान्नु हुन्न। म एकपटक डेनिडाको फेलोसिपमा डेनमार्क गएको थिएँ। हामीलाई कलेज र फाइभ स्टार होटेलमा राम्रोसँग राखे। नाम त हाम्रो भयो, सबै पैसा उनीहरूले प्रयोग गरे। त्यसबेला कम्प्युटर भर्खरै आएको थियो। सबैलाई एउटा(एउटा कम्प्युटर किनिदिए। अलि(अलि दिएको पकेट खर्च पनि उतै खर्च गराइसकेर फर्काए। हेर्दाखेरि ठूलो प्रोजेक्टमा लगेर शिक्षा दिएको जस्तो। तर पैसाचाहिँ उतै गयो। आईएनजीओहरू पनि पैसा उतै फर्कने र नाम पनि उनीहरूकै रहने गरी काम गर्छन्।
किसानमा माटोसम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ। कुन किसिमको माटोमा कस्तो मल हाल्ने, बीउ कस्तो प्रयोग गर्ने रु बजारको अवस्था कस्तो छ, बजारमूल्य के हो रु यस्ता अनेकन विषयमा हेक्का हुनुपर्छ। अनि मेसिन प्रयोग गरेर मानवीय श्रम घटाउनुपर्छ।
भर्खरै बिचौलियाका कारण तरकारी महँगिएको भन्ने समाचार छयापछयाप्ती आयो, हाम्रोमा किसानले कहिले आफ्नो उत्पादनको बजारमूल्य आफैं तोक्न पाउने ?
रेल ल्याउने कुरालाई अवसरकै रूपमा लिनुपर्छ। त्यसका लागि अहिल्यैदेखि आफूलाई तयार गरेर राख्नुपर्छ। रेल आउँदा भरिभराउ होला, फर्कंदा के पठाउने रु या रित्तै पठाउने रु ढुंगागिटी त पठाउने होइन होला। कृषिउपज नै पठाउने हो, किनकि हामीसँग हुने नै त्यही हो। फलफूल होला। स्कटल्यान्डले स्कच हुन‍् वस्की बेचेर आफ्नो अर्थतन्त्र त्यहाँ पुर्‍यायो। हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको अथाह सम्भावना छ। त्यसबाट बन्ने अल्कोहलिक उत्पादन विश्वबजारलाई किन नबेच्ने ? हामीले रक्सी बेच्नु हुँदैन र ? हामीले जडीबुटी बेच्ने हो। रेल आउँदैछ, त्यसलाई भर्ने सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र त्यहाँको मागअनुसार तयार गर्ने हो। राज्य साँच्चै लाग्ने हो भने १० वर्षभित्र देशमा साह्रै ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसका लागि नेताहरू त्यति त्यो गतिमा खट्नुपर्छ, जुन गतिमा उहाँहरू अहिले चुनाव-प्रचार क्रममा खट्नुभएको छ। सही योजना बनाएर रातदिन खट्नुपर्छ।
← खेताला नपाउँदा धान खेतमै
सुन्नुभयो, एउटै लौकाको मूल्य ४५० रुपैयाँ ! →
वेलायतबाट ल्याइयो ट्राउट माछाको ३० हजार अण्डा